Nanasonia fifanarahana mitentina US$ 2,5 tapitrisa dôlara amerikana (1,8 tapitrisa livres sterling GBP) niaraka tamin’ny UNICEF ny firenena anglisy, ho tolo-tanana fanampiny mandritry ny 12 volana ho an’ny sehatra maro samihafa. Izany dia mikendry ny hamonjena aina aman-tapitrisany izay tandindomin’ny tsy fanjarian-tsakafo lalina sy tsy fahatomombanana ara-tsakafo any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara.
Ity famatsiam-bola avy amin’ ny firenena anglisy ity dia hampiakatra ny tahan’ny fahafahana mahazo rano ho an’olona miisa 25 000 ary hanome fanampiana ara-bola vonjimaika ho an’ny tokantrano miisa 6 500 any Atsimo.
Io famatsiam-bola vaovao io dia hahafahan’ireo toeram-pitsaboana mandehandeha manome fitsaboana tsara kalitao ho an’ny ankizy miisa 35 000 sy vehivavy miisa 6 000, manamafy ny fitsirihana sy ny fandraisana an-tànana ny tsy fahampian-tsakafo lalina, ary miantoka ny fikarakarana tsara ho an’ny olona tandindomin-doza miisa 9 000 mba hisorohana ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy.
Androany, ny firenena anglisy dia nanambara ny fifanarahana mitentina 2,5 tapitrisa dôlara miaraka amin’ny UNICEF mba hiantohana fahafahana misitraka rano fisotro madio sy fitsaboana tsara, fikarakarana ara-tsakafo ary fanomezana vola ho an’ny olona anarivony maro ianjadian’ny haintany goavana any antsimon’i Madagasikara.
Vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro dia nandalo haintany anisan’ny mafy indrindra tao anatin’ny 40 taona tany Atsimo. Olona miisa 1,15 tapitrisa no mijaly amin’ny tsy fahatomombanana ara-tsakafo mafy noho ny fahavoazana hatramin’ny 60 isan-jato tamin’ny fambolena tao amin’ny distrika telo. Nanomboka tamin’ny volana Desambra 2020 dia niakatra be ireo trangana tsy fanjarian-tsakafo mafy sy mahery vaika ary mbola mitohy ny fahasimbana aterany raha toa ka tsy misy vahaolana mifanaraka amin’izany.
Vao maika nanasarotra ny krizy ny valan’aretina COVID-19 izay namela fianakaviana maro tsy hanana asa fivelomana, ary nahatonga ny maro tamin’izy ireo hampiasa fomba ratsy hahafahana mivelona, toy ny fifindra-monina any an-tanàn-dehibe. Vao maika izany nampitombo ny tandindo-doza izay efa natrehan’ireo antokon’olona marefo ireo, ary nampiakatra ihany koa ny tahan’ny trangana herisetra nihatra tamin’ny ankizy sy herisetra mifototra amin’ny maha-lahy sy vavy, izay 25% teo aloha ary lasa 50%.
Ireo vondrom-piarahamonina lasibatry ny tsy fahatomombanana ara-tsakafo any amin’ny faritra atsimo dia hisitraka fanampiana vonjimaika mitentina 2,5 tapitrisa dôlara, izay hahafahana mahazo ireto manaraka ireto, amin’ny alàlan’ny mpiara-miombon’antoka UNICEF:
. Rano sy fidiovana ary famatsiana ho an’olona miisa 25 000;
. Fikarakarana ho amin’ny fahatomombanana ara-tsakafo amin’ny alàlan’ny fandefasana vola ho an’ny tokantrano miisa 6 500;
. Fitsaboana ireo aretina mpahazo ny zaza mifandraika amin’ny tsy fahampian-tsakafo mahery vaika ho an’ny ankizy miisa 35 000 sy vehivavy miisa 6 000;
. Fisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo lalina amin’ny alàlan’ny fahafahana misitraka ireo tolotra avy amin’ny sampan-draharaha miadidy ny fitsirihana sy ny fanoroan-dàlana mikasika ny sakafon’ny zaza menavava sy ny ankizy mila izany vonjimaika; fianakaviana miisa 150 000 ahitana ankizy no iantefan’izany;
. Fomba hiarovana amin’ny herisetra atao amin’ny vehivavy sy ny ankizy, ka 9 180 amin’izy ireo no ahiana ho tratran’izany.
Ity famatsiam-bola ity dia manamafy ilay fandraisan’andraikitra teo aloha izay mitentina 1 tapitrisa livres sterling avy amin’ny Royaum Uni ho an’i UNICEF Madagasikara tamin’ny desambra 2019, tamin’ny alàlan’ny Africa Humanitarian Response Fund (AHRF).
Araka ny fanambaran’i David Ashley, Ambasadaoron’ ny firenena anglisy eto Madagasikara :
«Tena mampivarahontsana ny toe-draharaha any atsimon’I Madagasikara. Ny haintany mitohy izay mifandraika amin’ny vokatry ny fiovaovan’ny toetany dia mahatonga olona anarivony maro ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika, ka ahiana ho lasibatry ny hanoanana. Ilay fanampiana vaovao avy amin’ny fanjakana Britanika nolazaina androany dia hamonjy aina maro amin’ny alàlan’ny fanatsarana ny fahafahan’ny fianakaviana sy ankizy anarivony any amin’ny faritra atsimo misitraka rano fisotro madio sy fitsaboana ary famatsiana ara-bola. »
Hoy i Michel Saint-Lot, Solotenan’ny UNICEF Madagascar:
« Ity famatsiam-bola ity dia sady manome vahaolana eo no ho eo no mametraka fototra sahady ho an’ny fiorenana sy fampandrosoana lavitr’ezaka. Amin’ny fanamafisana ny fahaizan’ireo vondrom-piarahamonina maro eo an-toerana mitsirika sy mandray an-tànana ny tsy fanjarian-tsakafo mihatra amin’ny ankizy ary amin’ny fiantohana ny fanomezana rano fisotro madio, ny vina sy ny fanohanan’ny fanjakana Britanika dia hanena ny vokatr’ity haintany ity amin’ireo olona tena marefo, indrindra ny ankizy. »